Global Voices teny Malagasy » Votsotra i Loujain al-Hathloul, ilay Saodiàna vavy mpikatroka, ary nibitsika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Febroary 2021 2:39 GMT 1	 · Mpanoratra Dahlia Kholaif Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Sary nozarain'i Loujain al-Hathloul tao anatin'ny bitsika voalohany nalefany taorian'ny namotsorana azy avy any am-ponja.
Hatramin'ny 2018 i Loujain al-Hathloul, ilay Saodiàna vavy, mpikatroka malaza sady mpanao fampielezankevitra, no efa naiditra am-ponja noho ny fitakiany hampitsaharana ny rafitra fiahian-dehilahy sy ny fandraràna ny vehivavy tsy hahazo hamily fiara. Nafahana tamin'ny herinandro lasa iny izy ary nandefa ny bitsika voalohany nanomboka tamin'ny Alarobia.
Tafaverina miaraka amin'ny fo feno fankasitrahana, saingy torovan'ny hadisoam-panantenana an'arivony
— لجين هذلول الهذلول (@LoujainHathloul) 17 Febroary 2021 
Loujain, izay nalaina an-kery  avy any amin'ny Emirà Arabo Mitambatra tamin'ny May 2018, nampijaliana, tsy navela notsidihan'ny fianakaviana, ary natokana toerana naharitra fotoana maro nandritra ny namonjàna azy, dia nomelohina hifonja mandritra ny enina taona tamin'ny 28 Desambra 2020, didy navoakan'ilay fitsarana malaza ratsy misahana ny asa fampihorohoroana ao amin'ny fanjakàna. Ilay fetran-taona enina, izay ny antsasany nataon'ilay didy ho sazy mihantona, dia nihena raha oharina amin'ny fanamelohana faratampony 20 taona am-ponja izay notakian'ny  fampanoavana tamin'ny 17 Desambra.
Ny gazety ao an-toerana , raha nitanisa ilay fanapahankevitry ny fitsaràna, nilaza fa i Loujain, 31 taona, dia voaheloka ho “nanao heloka bevava voararan'ny andininy faha-43 ao amin'ny Lalàna miady amin'ny Asa Fampihorohoroana “, isan'izany ny fiarahana miasa amina hery vahiny mpanozongozona, sy ny fampiasàna ny aterineto ho fanohanana fandaharam-potoana iray avy any ivelany ho ao anatin'ny fanjakàna, ka tanjona amin'izany ny hanohintohinana ny filaminam-bahoaka.
Miainga avy amin'io didy io, efa nioman'ny fianakavian'i Loujain ny fanafahana azy amin'ny Martsa, satria efa vitany nandritra ny fihazonana azy teo am-piandrasana ny fitsaràna ny ankamaroan'ny saziny.
An-kafaliana no nandraisan'ireo pôlitisiàna sy mpanohana erantany ilay fivoaran-draharaha, izay nomarihan'ny fianakaviany fa mbola mihatra amin'i Loujain ny fandraràna azy tsy hahazo mivezivezy any ivelany sy ny famerana ny fisehoany imasom-bahoaka.
Misaotra an'i @POTUS ! Tsy manana fahalalahana ny rahavavaiko, raràna izy tsy hahazo mivahiny any ivelany, toy izany koa ny fianakaviany. Mbola mitohy ny fitsaràna azy.
Misaotra hatrany amin'ny fanohanana
— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) 10 Febroary 2021 
Ny filoha frantsay Emmanuel Macron nibitsika hoe:
Faly aho tamin'ny nanafahana an'i Loujain al-Hathloul ary iombonako ny fahamaivamaivanan'ny fianakaviany.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10 Febroary 2021 
Christiane Amanpour, mpanentana ao amin'ny VNN, nanoratra hoe:
Afaka saingy tsy mbola manana fahalalahana
— Christiane Amanpour (@camanpour) 17 Febroary 2021 
Ilay famotsorana malaza azon'i Loujain dia iray amin'ireo fivoarana miabo marobe  amin'ny rafitry ny lalàna manoloana ireo mpikatroka sy gadra noho ny resaka pôlitika ao Arabia Saodita, izay ny sasany nafahana ary ny hafa nomena fanalefahan-tsazy.
Ny fiovàna tao amin'ny Trano Fotsy no voalaza ho nitondra io fiovàna io. Ny fialàn'ny fitantanan'i Donald Trump, izay tsy dia niraharaha ny resaka zon'olombelona tao amin'ilay faritra, nandrisika ireo fitondràna tsy refesimandidy, ary ny fahatongavan'ny fitantanana iray maniry ny hanao tsindry amin'ireo mpiaradia aminy mba hanaja ny zon'olombelona no mety nanafaingana ny fitsaràna nitarazoka sy nampihena ny sazy.
Ny namotsorana ilay mpikatroka malaza dia mandrisika ihany koa ny fitakiana hamotsorana ireo hafa nogadraina noho ny resaka fanehoana hevitra, izay mbola mihiboka  any anatin'ireo fonja saodiàna.
ALQST, vondrona tsy miankina iray mpiaro zon'olombelona izay mijery manokana ireo olana saodiàna, nanoratra hoe:
Fanafahana narahana fepetra nomena ireo roa mpiaro zon'olombelona, #Lujain_Hathloul sy #Nouf_Abdulaziz.
Kanefa, tsy mbola vita ireo fitsaràna hafa, ary ao anatina fivoarana mampiahiahy dia nanaovan'ny Fampanoavana fampiakarana ny didy momba ny raharahan'i Nassima Al-Sada, andrana hitadiavana sazy henjana kokoa.
#ALQST dia mitaky ny famotsorana tsy misy fepetra ho an'ireo rehetra voagadra https://t.co/nfJdPmrzEy pic.twitter.com/gDvf6dH3hn 
Adam Coogle, tale lefitra ao amin'ny rantsan'ny Human Rigths Watch, faritra Afovoany-Atsinanana sy Afrika Avaratra, nibitsika hoe:
Ok, MBS, fotoana izao tokony hodian'i Abdulrahman an-trano, ampy izay, tena ampy @AreejASadhan  https://t.co/m045NSCPWo 
— Adam Coogle (@cooglea) 1 Febroary 2021 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/02/19/151587/
 nalaina an-kery: https://globalvoices.org/2020/12/29/saudi-court-slams-jail-term-to-iconic-female-activist-despite-global-criticism/
 gazety ao an-toerana: https://sabq.org/T24vGf?t=1609148969
 Lalàna miady amin'ny Asa Fampihorohoroana: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1
 mbola mihiboka: https://globalvoices.org/2021/01/13/arab-states-reconciliation-with-qatar-leaves-pro-unity-saudis-behind-bars/